Daawo: Qeybtii koowaad ee wareysiga Fahad Yaasiin - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Qeybtii koowaad ee wareysiga Fahad Yaasiin
Daawo: Qeybtii koowaad ee wareysiga Fahad Yaasiin
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa caawa lasii daayey qeybtii koowaad ee wareysi uu taliyihii hore ee NISA iyo agaasimihii hore ee Villa Somalia Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu siiyey warbaahinta Gaylan Media.
Qeybtan, wuxuu Fahad uga hadlay taariikh nololeedkiisa iyo sida uu kusoo galay siyaasadda Soomaaliya iyo xiriirkiisa madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Fahad wuxuu sheegay inuu dhashay dabayaaqadii toddobaatameeyadii, islamarkaana ay soo korisay hooyadiisa, isaga oo xusay inuu soo noqday Macallin dugsi Qur’aan, kahor inta aanu Jaamacad u aadin Yemen, kadibna noqon weriye.
Waxa uu qiray inuu xubin firfircoon ka ahaa ururka Al-Itixaad Al-Islaami ee markii dambe u xuubsiibtay Ictisaam, islamarkaana uu ka gaaray darajo sare oo ah inuu gobol madax uga noqday. “Waan ku faraxsanahay, waana ku faanaa inaan xubin ka ahaa,” ayuu yiri.
Fahad wuxuu beeniyey inuu kaalin dhaqaale ku lahaa doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh ee 2012-kii, oo uu siiyey lacag laga soo qaaday Qatar, balse wuxuu xaqiijiyey inuu ka mid ah ololihiisa doorashada.
Waxa uu xaqiijiyey inuu Xasan Sheekh usoo jeediyey inuu ra’iisul wasaare ka dhigo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse uu diiday taasina ay noqotay dhibac yar oo madow oo gaartay xiriirkooda.
Si kastaba, Fahad wuxuu sheegay in taasi ysan aheyn sababtii ay ku kala tageen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh. Fahad ayaa ku warramay in arrintaas ay kadib ka heshiiyeen madaxweyne Xasan Sheekh ayna sii wada shaqeeyeen.
Waxaa la weydiiyey sababta uu u diiday xilkii wasiirka dekedaha ee uu u magacaabay Cumar Cabdirashiid 2015-kii, wuxuuna ku jawaabay inuu u arkay xilligaas in qanaacadiisa siyaasadeed iyo damiirkiisa aysan waafaqin habkii loo maamulayey dowladdaas.
Fahad ayaa beeniyey inuu milkiile ka ahaa dowladdii Xasan Sheekh iyo middii Farmaajo, isaga oo ereygaas ku qeexay mid aan habooneyn, balse wuxuu qiray inuu ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow Farmaajo ee talooyinka ku leh.
Fahad ayaa sheegay in isaga iyo Farmaajo ay is-bareen dad aad ugu dhowaa isaga, kadibna uu ku qancay aragtidiisa siyaasadeed.
Hoos ka daawo wareysiga Fahad